Filoha lefiftry ny Ceni, Rakotonarivo Thierry: ”Tsy fahefanay ny mitsara na manasazy ireo mihoam-pefy…” | NewsMada
Filoha lefiftry ny Ceni, Rakotonarivo Thierry: ”Tsy fahefanay ny mitsara na manasazy ireo mihoam-pefy…”
Niaiky ny fahelemen’ny lalàna momba azy ny eo anivon’ny Ceni. Tsy mitovy amin’ny rafitra mpikarakara ny fifidianana any ivelany ny eto amintsika fa voafetra ihany.
“Tsy manana fahefana hisambotra ny Ceni, na hitsara, na hanasazy ireo rehetra manao tsy fanarahan-dalàna amin’ny fifidianana. Ny mampitandrina no azon’ny Ceni atao, ary mitondra ny raharaha eny anivon’ny fitsarana. Mitory toy ny olon-tsotra rehetra izy, ary miandry ny valin’izany amin’ny fitsarana.” hoy ny filoha lefitry ny Ceni, Rakotonarivo Thierry, ny amin’ny mety ho fandikan-dalàna, indrindra ny fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana. Hita ho teboka mampalemy ny Ceni eto Madagasikara ny amin’izany, araka ny nambarany, raha oharina amin’ny Ceni any ivelany: manana fahefana hatramin’ny famoahana ny voka-pifidianana ofisialy, misy manana fahefana hanasazy sy hanenjika izay mandika lalàna ny sasany.
Sazy tsy lasa lavitra…
Ny sazy mba azon’ny Ceni atao eto Madagasikara, ny amin’ny fametrahana peta-drindrina. Rehefa misy olona mametraka peta-drindrina tsy ara-dalàna, amin’ny toerana tsy fanaovana fampielezan-kevitra: azon’ny Ceni atao ny milaza ny hanalana izany. Raha tsy manala izany ny tompony, ny Ceni no manakarama olona hanala azy. Eo no misy sazy kely izay tsy azo antoka hoe ho tonga aiza: fandoavam-bola tamin’ny nanalana ny peta-drindrina. “Angaha misy manao an’izany?”, hoy izy.
Voarara ny fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana
Amin’ny 6 mey amin’ny 6 ora maraina ka hatramin’ny 25 mey amin’ny 12 ora alina ny fampielezan-kevitra. “Voarara ny fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana, fa ny fiomanana mialoha ny fampielezan-kevitra no tsy voafaritra hoe: manomboka rahoviana, ary inona avokoa ny zavatra atao amin’izany?”, hoy izy.
Tsy voararan’ny lalàna ny fizarana fanomezana sy ny asa sosialy, rehefa tsy ampiarahina amin’ny fandresen-dahatra ny olona hifidy ny tena. “Raha mizara zavatra na sakafo, ohatra, ny tena, afa-miteny ny fandaharanasa fa tsy miteny fotsiny hoe: “Ampionareo aho”, midika ihany hoe “Fidio aho””, hoy ihany izy.